Momba anay - HEBEI ENGE BIOTECH CO., LTD
Finday / Whatsapp / Wechat: 0086-13933032315
Fanaraha-maso ny fahasalamana
ENGE Teraka ho an'ny fambolena
Mifantoha amin'ny fahasalamana
Enge Biotech dia mipetraka ao Shijiazhuang Hebei, Sina. mirotsaka amin'ny famokarana agrochemicals ao anatin'izany ny Insecticides, Herbicides, Fungicides, Plant grow regulator, ny fifehezana ny pest amin'ny fahasalamam-bahoaka, ny mpanelanelana amin'ny pestiside ary ny zezika. , SL, ME, GR, sns. Ny ekipanay dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny famokarana fanafody famonoana bibikely. Tohano ny fisoratana anarana maherin'ny 50 (ICAMA) ary manana fahaizana matanjaka amin'ny vokatra vaovao R&D.
Ny kalitao no fiainan'ny orinasanay. Enge Biotech vokatra rehetra avy azo atokisana, mpamatsy voamarina, Ny ozininay mifehy kalitaon'ny vokatra hentitra, miaraka amin'ny fitaovana famokarana mandroso eto amin'izao tontolo izao, dia mamolavola sy manamboatra amin'ny fomba tompon'andraikitra, miantoka ny vokatra sy ny fomba famokarana mifanaraka amin'ny fenitra faran'izay henjana.
Fihaonana amin'ny fenitry ny FAO, ary andramo ihany koa ny tsara indrindra hahafeno ny fepetra takian'ny kalitaon'ny mpanjifa.
Fanomezana ho an'ny mpanjifa vokatra azo antoka, sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana ary mora ampiasaina.
Manome ny mpanjifa vokatra sy serivisy maharitra, maharitra ary maharitra.
Tohanan'ny rafitra fifehezana kalitao henjana sy ny traikefa an-taonany maro. Enge Biotech dia nanondrana vokatra maherin'ny 100 karazana miaraka amina andiam-pamolavolana any amin'ny firenena mihoatra ny 30, ny tsena lehibe dia i Azia, Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Afrika ary Russia. Nahazo laza tsara izahay noho ny vokatra tsara sy ny serivisy tena tsara.
Ny fambolena no zava-dehibe indrindra eto an-tany
Ny lanjanay sy ny tanjontsika dia ny hampanan-karena ny fiainan'ireo izay mamokatra sy ireo izay mihinana, miantoka ny fandrosoana ho an'ny generon ho avy, ny Enge Mission dia ny hamokarana fanafody mahomby be, ambany poizina ary ambany residue, Arovy ny fahasalaman'ny vokatra ary ny fahasalamam-bahoaka, miara-maniry. miaraka amin'ny mpanjifa manerantany.
No.158, Huaian East Road, Distrikan'i Yuhua, Shijiazhuang, Sina